Ambongadiny XGEAR Maivana sy mafy orina Pop Up Shower Lay Efitrano manokana ho an'ny camping, fitsangatsanganana amin'ny Big Size Manufacturing sy Factory |XGEAR
XGEAR Maivana sy mafy orina Pop Up Shower Lay Efitrano manokana ho an'ny lasy, fitsangatsanganana amin'ny habeny lehibe
XGEAR Pop Up toby fialofana lay dia lay fandroana mety izay manome toerana portable sy manokana ho an'ny fanovana akanjo, fandroana ary fampiasana ny efitra fandroana amin'ny fotoana rehetra, na aiza na aiza.Ny habeny dia 4′ x 4′ x 78″(H) izay avo kokoa sy midadasika kokoa noho ny hafa, mahazo aina kokoa izy io satria ny tampony midadasika kokoa dia manome toerana bebe kokoa ary tsy dia misy fitohanana.
Ny lay douche Pop up dia mora apetraka sy aforitra, tsy misy fitaovana ilaina.Manolotra toerana manokana ho an'ny fampiasana vilany, douche camping ary maro hafa.Izy io koa dia mety tsara amin'ny dia an-dalana, fitifirana an-kalamanjana, filalaovana ankizy, fifaninanana dihy ho an'ny ankizy, toeram-pivarotana akanjo, sns. Maivana sy mafy orina.
● Maivana sy mafy orina Pop up Shower Lay dia manolotra efitra manokana amin'ny habe mampionona ho an'ny fampiasana vilany, akanjo, lasy fandroana sy ny maro hafa.Ny varavarana lehibe misy zipper dia tena azo idirana.Izy io dia miditra sy mivoaka amin'ny alàlan'ny fidirana anatiny misy zipper.Rafitra vy mahatohitra harafesina sy malefaka ho an'ny pop-up mora.
● Ny endrika fanokafana douche skylight lehibe dia mampihena ny zavona ary mifoka rivotra kokoa.
● Afaka mitazona ny efitrano ho madio amin'ny endrika tapany ambany izy io, ary manome douche mampahazo aina.
● Tady fisintonana 4 misy tsato-kazo vy 8 dia afaka manome fitoniana sy fiarovana amin'ny rivotra.
● Lamba: polyester 190T manondraka rano, maivana nefa mateza.
● Ny fanorenana faran'izay maivana sy ny habe miforitra mikitroka dia mamela ny fitaterana mora miaraka amin'ny kitapo mitondra.
● Habe lehibe amin'ny 4' x 4' x 78"(H) mba hanomezana fiainana manokana sy fialofana maharitra kokoa ho an'ny fampiasana.
Fitaovana fototra 190T polyester manohitra ny rano
loko Manga /Grey maizina
sizy 4' x 4' x 78" (H)
Haben'ny entana (habe miforitra) L25.2 x W25.2 x H2.36 santimetatra
Lanja entana 3.4KG
Haben'ny baoritra L25.5x W25.5 x H19 santimetatra (8pcs/box)
CartonGross Weight 28KG
XGEAR Lightweight Shower antsipirihan'ny tranolay sy ny asany：
Ahoana ny fomba hanoratana ny lay privacy?
● 1. Atsofohy fotsiny ny zorony rehetra mankany amin'ny zorony mifanohitra mba hampihenana ny rindrina efatra ho takelaka roa, atsangano ny tsipika mifanindry ambony sy ambany.
● 2. Ampifandraiso amin'ny lafiny iray ny rindrina roa ary apetraho amin'ny ilany iray.
● 3. Asandrato ny tapany ambony amin’ity lay ity, ary miondrika miankohoka eo ambany, araka ny voalaza ao amin’ny Dingana 1.
● 4. Amin'ny tanana eo amin'ny sisiny tsirairay ao anatiny araka ny voalaza ao amin'ny dingana 2
● 5. Ento miditra ny ilany iray, arahin’ny ilany hafa araka ny voalaza amin’ny Dingana 3
● 6. Efa vonona ny trano lay fandroana eo noho eo.
Ny lay fiainana manokana dia tsara ho an'ny ankizy milalao, sary modely, portable camping kabine, amoron-dalana efitra fandroana, pop-up efitra fisoloana akanjo sy dihy teatra.
teo aloha: TPE Yoga Mat misy tsihy ara-batana mitondra tady ho an'ny fanazaran-tena amin'ny gorodona
Manaraka: Fampiofanana haingam-pandeha haingana miaraka amin'ny Tohatra TPE ho an'ny fampiofanana ara-batana sy baolina kitra